नमस्कार मेरो छाला चिलाउने समस्या करिबन6महिना अगाडीबाट शुरु भएको हो र मैले कहिले anti allergic दबाइहरु ख ादाखेरि केहीदिन निको भए जस्तो महशुस हुन्छ। तेस पछाडि फेरि उही प्रकृतिको छाला चिलाउछ र चिलाएको ठाउँमा डाबर आउँछ यो के समस्या होला? | Hamro Doctor
नमस्कार मेरो छाला चिलाउने समस्या करिबन6महिना अगाडीबाट शुरु भएको हो र मैले कहिले anti allergic दबाइहरु ख ादाखेरि केहीदिन निको भए जस्तो महशुस हुन्छ। तेस पछाडि फेरि उही प्रकृतिको छाला चिलाउछ र चिलाएको ठाउँमा डाबर आउँछ यो के समस्या होला?
on Fri, Mar 27 2020 10:10 PM
मेरो लागि चित्तबुझ्दो उत्तर भएन। धन्यवाद
on Sat, Mar 28 2020 01:10 PM
के कारणले चिलाएको हो सो यकिन गर्नुहोला। धुलो, धुवा, किरा, कुनै सामान वा के बाट एलर्जी छ पत्ता लगाएर सो बाट टाढा बस्नु नै सबैभन्दा उत्तम उपाए हो । एलर्जीलाई पुर्णरुपले सन्चो पार्न सकिँदैन । बढी भएको बेला त्यही एलर्जीको औसधि खाने हो अरु बेला सकेसम्म जे कुराले एलर्जी गराउछ सोबाट बच्ने हो। धन्यवाद
on Sat, Mar 28 2020 08:40 AM
Hello, I have some skin allergies on the back low side of the head... on Mon, May 25 2020 06:19 PM
I have some skin allergy on the back low side of head just above... on Mon, May 25 2020 06:17 PM
Hi I'm 23 male, Are there any allopathic medicines or home... on Mon, May 25 2020 02:18 PM
22 Female, I had an small accident in my childhood and I had to... on Mon, May 25 2020 02:11 PM
balanitis ko medicine vandinu na best result diney... can... on Mon, May 25 2020 12:21 AM